DeleteCut dia mamela antsika hamafa haingana ny teny iray manontolo | Vaovao IPhone
DeleteCut dia mamela antsika hamafa haingana ny teny iray manontolo
Eo am-piandrasana hahitana raha manolotra anay ny mety hisian'ny Jailbreak ho an'ny kinova farany an'ny iOS 9.2 ireo tovolahy avy any Pangu na TaiG, amin'izao fotoana izao, ireo mpampiasa rehetra mbola manana ny iOS 9.0.2 napetraka sy mankafy ny Jialbreak dia afaka mampiasa vaovao ahodino izany mamela antsika hanafaingana ny fomba mamafa ny teny iray manontolo. Rehefa te hamafa teny iray isika dia tsy maintsy manindry imbetsaka ny fanalahidy hamafana mandra-pahatongan'ny tarehin-tsoratra rehetra ao amin'ilay teny, dingana iray izay miankina amin'ny teny dia afaka maharitra elaela.
Soa ihany noho ny Jailbreak azontsika atao ny mampiasa tweak ahafahantsika manafaingana ity fomba ity. Ilay tweak resahina dia antsoina hoe DeleteCut. Ity tweak ity dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra izay, na inona na inona antony, matetika izy ireo dia manoratra lahatsoratra lava amin'ny fitaovantsika, na iPhone na iPad. Raha vantany vao nametraka ilay tweak isika, dia handeha amin'ny safidiny atolotray antsika hametraka ny loko izay haseho ny lakilen'ny famafana rehefa te hampiasa ity fanovana ity izahay.
Raha te hampandeha ilay tweak, satria raha ny tena izy dia manohy miasa amin'ny fomba mitovy ihany ny lakile fanalahidy, tsy maintsy manindry ary tazomy ny lakilen'ny Shift ary avy eo tsindrio ny bokotra famafana, izay haseho amin'ny loko efa natsangantsika teo aloha. Rehefa manova ny lokon'ny bokotra mamafa, dia tsy maintsy tadidintsika fa isaky ny manindry ny bokotra isika dia ho voafafa tanteraka ny teny rehetra ao aoriany fa tsy ny taratasy sy ny taratasy toa ny zava-misy ankehitriny.
Ity tweak ity, araka ny efa nanamarihako, dia mety indrindra ho an'ireo izay manoratra isan'andro amin'ny iPad na iPhone na raha toa ka ireo mpampiasa ireo no mampiasa azy io ho hany fitaovana soloina ny solosaina finday. Ity tweak ity dia azo alaina avy amin'ny BigBoss maimaim-poana, ka amin'ny fitsapana dia tsy hahavery na inona na inona isika. Nandritra ny roa andro no nampiasako azy ary tena atoro ahy tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » DeleteCut dia mamela antsika hamafa haingana ny teny iray manontolo